राहुल गान्धी की नरेन्द्र मोदी ? – Khabar Art Nepal
राहुल गान्धी की नरेन्द्र मोदी ?
By खबर आर्ट नेपाल	 On १ बैशाख २०७६, आईतवार १८:१४
भारतमा अर्को सातादेखि १७ औं लोकसभाको लागि आम निर्वाचन हुँदैछ । २ महिनाभित्र ७ चरणमा सो निर्वाचन सम्पन्न हुन लागेको हो । भारत विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेको मुलुक हो । यो निर्वाचनमा करिब १ अर्ब मतदाताले भाग लिँदैछन् । निर्वाचन लोकसभाको निम्ति हुन गइरहेको भए पनि प्रमुख केन्द्रबिन्दु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन् । निर्वाचन उनैको पक्ष र विपक्षमा हुँदैछ ।
अहिलेसम्म उनलाई सीधा टक्कर दिन सक्ने राजनीतिज्ञ देखा परेका छैनन् । यद्यपि, आगामी सरकार कसको बन्दैछ भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र छ । सय वर्षभन्दा पुरानो कांग्रेस पार्टीका नेताको रुपमा राहुल गान्धी चुनावी दौडमा धेरै पछाडि छन् । निर्वाचनको बेला मतदाताले अवश्य उनलाई मोदीसँग तुलना गर्नेछन्, त्यसो गर्दा मोदीको तुलनामा धेरै हदसम्म कच्चा र अनुभवहीन देखिने पक्कापक्की छ । मोदी राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टी प्रायः सबैका साझा शत्रु हुन् तर प्रान्तीय स्तरमा सत्तारुढ दलविरुद्ध अन्य पार्टीहरु एकजुट भए पनि केन्द्रमा तत्कालै राहुल गान्धीलाई ल्याउन अरुले पनि चाहेका छैनन् ।
सन् २०१४ को निर्वाचनताका भारतलाई हाइ–टेक प्रविधियुक्त बनाउने नारा दिएर मोदी चम्केका थिए । बितेको ५ वर्ष उनको क्रियाकलाप त्यति सन्तोषजनक मान्न सकिने खालको रहेन । आन्तरिक मामिलामा होस् वा वैदेशिक । गत निर्वाचनमा नेपालसित सीमा जोडिएका दुईवटा राज्य उत्तर प्रदेश र बिहारमा भाजपाले अत्यधिक सिट जितेको थियो, ५ सय ४७ मा १ सय २० । जबकि सबै राज्यबाट गरी सो दलले पाएको कूल सिट २ सय ६७ हो । भन्नुको अर्थ बहुमत सिट जितेर केन्द्रमा सरकार गठन गर्न भाजपालाई यिनै दुई ठूला राज्यले ठूलो सहयोग गरेका हुन् ।
नेपालनजिकका अरु राज्यको परिणाम हेर्ने हो भने पश्चिम बंगालबाट २४, सिक्किमबाट १ र उत्तराखण्डबाट ५ गरी कूल ४८ सिट मात्र बिजेपीले जित्न सक्यो । यतिखेर भाजपाले उत्तरप्रदेशमा मायावती–अखिलेश तथा बिहारमा लालुप्रसाद र कंग्रेसको साझा मोर्चासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमार लालुप्रसाद यादवसित टक्कर लिँदैछन् । नितिश र भाजपाको गठबन्धनमा के लालु भाजपामाथि भारी पर्न सक्लान् ? राजनीति सम्भावनाको खेल हो, जे पनि हुन सम्भव छ ।
परिणाम पहिलाको भन्दा पूर्णतः भिन्न निस्कँदैछ । पहिले भाजपाले उत्तरप्रदेश र बिहारमा शुरुमा एकल र पछि गठबन्धन सरकार चलाउन सफल भएको थियो तर यसपालि उसलाई चुनाव जित्न त्यति सहज छैन, किनकि त्यहाँ मोदीविरुद्ध विपक्षी दलहरु एकजुट भएका छन् । यदि यी दुई राज्यबाट अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो भारी संख्यामा जित्न सकेन भने केन्द्रमा सरकार बनाउन उसलाई धौ धौ पर्नेछ । हिन्दू बहुल राज्यको परिणाम त भाजपाले गत विधानसभा निर्वाचनमा देखिसकेकै छ । मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ र राजस्थानमा उसको नराम्रो हार भयो । जबकि चुनाव हुँदा ती तीनै राज्यमा भाजपा सत्तारुढ थियो ।
रोचक कुरा के भने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र उत्तरपश्चिम ५ वटै प्रदेशमा न भाजपाको न त काँग्रेसको स्थिति सुविधाजनक छ । दक्षिणका ४ राज्य तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला र कर्णाटकमा यी राष्ट्रिय पार्टीको भूमिका दोस्रो स्थानमा छ । दुवैले स्थानीय दललाई सघाएका छन् । पूर्वी क्षेत्रको स्थिति पनि त्यस्तै हो । पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जी र उडिसामा नवीन पटनायकको एकछत्र राजनीति चलेको छ । पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र र गुजरातमा दुवै राष्ट्रिय दल निर्वाचनमा प्रत्यक्ष लड्दैछन् तर त्यहाँ भाजपाको तुलनामा काँग्रेसको स्थिति यसचोटि मजबुत देखिएको छ । उत्तर पूर्वका ८ राज्यसँग कूल २५ सिट छ, जबकि आसाम एक्लैको १४ सिट छ भने बाँकी ७ वटा राज्यमा कसैको १ कसैको २ सिट मात्र छ ।
नेपालसित जोडिएको सिक्किममा विधानसभाको ३२ सिट भएर पनि लोकसभाको लागि मात्र १ सिट पाएको छ । हिमाली राज्य त्यहाँ दशकौंदेखि प्रान्तीय दलले नै सरकार चलाउँदै आएको छ, राष्ट्रिय पार्टी कंग्रेस र भाजपाको अस्तित्व नाममात्रको छ । अहिलेसम्मको सरगर्मी हेर्दा मोदी हुन् वा राहुल दुवै सरकार गठन गर्ने सहज पोजिसनमा देखिँदैनन् । मोदीको सिट झर्दैछ भने राहुलले केही संख्या बढाउने देखिन्छ । जहाँसम्म प्रान्तीय पार्टीको सवाल छ, धेरैजसो कंग्रेसलाई संघीय सरकार बनाउन दिन तयार देखिन्छन् भने कमले मात्र भाजपालाई सघाउँदैछन् । विभिन्न कारण देखाइ प्रान्तीय राजनीतिका खेलाडीहरु, जसले भाजपाको सरकारलाई समर्थन दिँदै आएका थिए, पछि हट्दैछन् ।
विगतको भन्दा अबको निर्वाचनको परिदृश्य भिन्न छ । गत निर्वाचनमा कंग्रेसको स्थिति कमजोर थियो । प्रान्तीय पार्टीहरु आपसमा लडेर छिन्नभिन्न भएका थिए । उता मोदीको चमकदमक उत्कर्षमा थियो । ‘हाइटेक’ अभियानले मतदाताको ध्यान आकर्षित भएकै हो । गुजरातमा मुख्यमन्त्री हुँदा गरेको प्रगति पनि सबैको सामु छर्लङ्ग थियो । उनको पार्टीले एक राज्यबाट अर्को राज्यमा निर्वाचन जित्दै गइरहेको थियो । तर भाजपाले एकाएक गौ हत्यामाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो, जसको कारण सम्बन्धित धर्मका किसानको अर्थतन्त्रमा असर पर्यो । साधारण किसान जोसँग दूध दिन छाडेका गाई हुन्थे उनीहरुको लागि ती गाई नगदे बालीसरह थिए ।
गाई बेच्न नपाएपछि एकातिर आम्दानी घट्यो भने अर्कोतिर अन्नपात नष्ट भयो । गौशालाहरु धराशयी भए । त्यसमाथि कतिपय विवादास्पद कानुनहरु ल्याइयो, नतिजास्वरुप भाजपाले सरकार चलाएका राज्यमा उसको राजनीति क्रमशः कमजोर बन्दै गयो । साथै मोदी–अमित शाहको पार्टी चलाउने तानाशाही प्रवृत्तिले कतिपय नेता र कार्यकर्तालाई पार्टीबाट पृथक बनायो ।लालकृष्ण आडवाणी र मुरलीमनोहर जोशी जस्ता वरिष्ठ नेताहरुलाई निश्क्रिय बन्न बाध्य पारियो । उनीहरुले चुनाव लड्नसमेत पाएनन् । उनीहरुको आसुरीकरण र ग्रस सर्भिस ट्याक्स (जिएसटी) नीतिको कारण स–साना लाखौं व्यवसायी रोजगारहीन बन्न पुगे । युवाहरुलाई रोजगारी दिने नारा नारामै सीमित भएपछि युवा मतदाताहरु निराश बने । जे होस् एकल नारा ‘कंग्रेसमुक्त भारत’ ले कामै गरेन ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा मोदीले आफूले पाएको सफलता देखाएर निराश जनतालाई सम्झाउने, बुझाउने प्रयास थाले । छिमेकी मुलुकहरुको भ्रमण गरे । जताततै राम्रो स्वागत पाए । नेपाल गएर सम्बन्धमा सुधार ल्याए । नेपालले पनि मोदीलाई भव्य स्वागत गर्यो । पछि लामो नाकाबन्दी र मधेशी दलहरुलाई गरेको समर्थनका कारण सम्बन्धमा चिसोपना आयो ।
परिस्थिति त्यतिबेला महत्वहीन बन्यो, जब काश्मिरमा आतंकवादी हमला भयो । भारतले हवाई आक्रमण गर्यो । पाकिस्तानले पनि प्रत्युत्तर दियो । भाग्यवश युद्ध भएन । पाकिस्तानले भारतीय पाइलट पक्राउ गरी लगत्तै सुम्पेपछि स्थिति साम्य भयो । भारतको यो आक्रमणले मोदी सरकारलाई झिनो लाभ दिए पनि निर्वाचनमार्फत् अर्को सरकार गठन गर्न यसबापत पर्याप्त सहयोग मिल्छ मिल्दैन हेर्न बाँकी नै छ । यदि भाजपाले सयभन्दा बढी सिट जितेर पनि अरु स–साना दलको सहयोगमा सरकार गठन गर्न बाध्य भयो भने यो मोदीको लागि राम्रो सूचक हुने छैन । यदि कंग्रेसको स्थिति अहिलेको जस्तै रह्यो र उसले पनि मिलिजुली सरकार गठन गर्नुप¥यो भने त्यो पनि राहुलका लागि राम्रो संकेत हुने छैन । छायाँकान्त नायक
(लेखक भारतीय प्रेस काउन्सिलका सदस्य तथा त्यहाँको आधिकारिक पत्रकार संगठनका महासचिव हुन्, यो लेख जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो ।)
लुक्लामा विमान दुर्घटना हुनुको कारण यस्तो रहेछ
पाथिभरामाताकाे दर्शनगरी भेटीस्वरूप ! हेर्नुहोस आजको राशिफल :